Waa maxay sababta ay qaaliga u tahay diyaaradda madaxwaynaha Maraykanka? - BBC News Somali
8 Disembar 2016
Image caption Air Force One - oo sii galaysa Cuba, wakhti dheerna waxaa loo arkayay in ay calaamad u tahay awoodda Maraykanka
Dawladda Maraykanka ayaa qorshaynaysa in ay 3.2 bilyan oo doolar u isticmaasho mashruuc lagu badalayo diyaaradda uu madaxwaynuhu isticmaallo ee Air Force One, laakiin madaxdwaynaha la doortay Donald Trump ayaan arrintaas ku faraxsanayn.
Trump waxa uu hadda ku talinayaa in la joogo wakhtigii laga laaban lahaa dalabka soo iibsashada diyaaradaas.
Waa maxay sababta ay qaali u tahay diyaaradan caanka ah?
Diyaaradda Air Force One, ma aha hal diyaarad oo kali ah ee waxaa magacaas qaata, diyaarad kaste oo ciidammada cirku leeyihiin oo uu madaxwaynuhu raaco.
Waa naadir in madaxwaynuhu uu raaco diyaaradaha rakaabka, waana taasi sababta madaxwaynaha loogu sameeyay diyaaradda uu nooceedu yahay 747-200 oo ah diyaarad millatari oo loogu talagalay in uu isticmaalo madaxwaynaha Maraykanka oo ah taliyaha guud ee ciidammada.
Nooca diyaaradani waxay hawl gashay 1990-meeyadii, wakhtigeeduna wuu sii dhamaanayaa, sidaa darteed milatariga ayaa dalbay nooc cusub oo ah 747-8.
Diyaradan waxay leedahay xarun talis oo guurguurta oo madaxwaynaha Maraykanku uu dalka ka maamuli karo hawada haddii weerar lagu qaado, sida uu sheegay aqalka cad ee Maraykanku
Image caption Diyaaradda Air Force One ee hadda dhererkeedu waa in kabadan 60ft midda la rabo in lagu badalo ayaase ka sii dheeraan doonta
Diyaarad taas ka wayn oo ka fiican
Waraysi uu Trump siiyay jariiradda Rolling Stone sanadkii hore ayuu ku sheegay in diyaaraddiisa shaqsigu ay ka wayntahay midda madaxwaynaha ee Air Force One
Taas Run ma aha
Diyaaradda Trump ee nooceedu yahay 757-200 dhankaste way ooga yartahay sida lagu sheegay qeexitaanka shirkadda diyaaradaha ee Boeing.
Image caption Diyaaradda qaaliga ah ee Trum ayaa ka yar midda uu sida rasmiga ah u adeegsan doono hadda wixii ka dambeeya
Diyaaradda Air Force One waa ay ka badin kartaa diyaaradaha gaarka loo leeyahay.
Masaafo ka dheer kuwa kale ayay duuli kartaa iyada oo awoodda in ay hal duulimaad kaga baxdo Washington oo ay ku gaarto Hong Kong, sidoo kale waxay awoodaa in ay hawada shidaal ku qaadato.
Waxaa laga yaabaa in diyaaradda Air Force One aysan ku xirnayn dahabyo sida midda Trump, balse waxyaabo kale oo cajiib ah ayay leedahay.
Air Force One hadda waxay leedahay saddex dabaq cabirkeeduna waa 400 oo mitir oo isku wareeg ah, waxaana ka mid ah xafiis gaar ah oo madaxwaynuhu leeyahay, xarun shir iyo xataa Jiim ama meel jimicsiga loogu talogalay
Jikada diyaaradda oo koox cunto kariyeyaal ah ay ka shaqeeyaan waxay hal mar quudin kartaa boqol ruux, qabanqaabadase waxaa sameeya cunto kariyeyaal milatari ah kuwaas oo xaqijiya in waxa la karinayo oo dhan ay bad qabaan.
Weriyeyaasha halkii marba diyaaradda la raaci kara madaxwaynaha waa 13, sirdoonka ayaana aad u baara ka hor duulimaadka iyo marka ay gudaha diyaaradda u galayaanba.
Weriyeyaasha waxaana la jooga sirdoon hubaysan kuwaas oo xakameeya dhaqdhaqaaqooda.
Sugitaanka ammaanka ee noocaas ahna wuu ka jiraa diyaaradda inteeda kale.
Qaybta madaxwaynuhu waxay ku taalaa dhinaca hore, meesha loo sii marana waxaa ku yaalla labo kursi oo ay markaste fariistaan sirdoonku.
Diyaaraddu waxaa kale oo ay leedahay xarun caafimaad oo u hawlgali karta sidii qayb qalliin markastana Dakhtar ayaa jooga.
Safar qaali ah
Dabcan waxaas oo dhan qiimaha ayay ku sii kordhinaysaa diyaaradda khaaska ah ee madaxwaynaha.
Diyaaradda Air Force One waxaa lagu qiyaasaa in ay saacad kaste ku baxdo 180,000 ilaa 200,000 oo doolar.
Taas ayaana ahayd waxyaabihii uu Trump ku dhaliilay Obama markii uu adeegsaday diyaaradda isaga oo u ol'olaynaya Hillary Clinton.
Haddii madaxwaynaha la doortay uu doonayo in uu diyaaradaha ka bilaabo yaraynta kharashka ku baxa safarada madaxwaynaha, taasi waa billaw uun.